I-07 / 02 / 2020 - RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 7, 2020
Amanani Afinyelelekayo kuKati nokudla kwenja
Ukuba isilwane kubaluleke kakhulu maqondana nokusabalalisa umuzwa wokuthandeka. Umqondo wokuthi yonke into ephilayo iyigugu wenza imininingwane yokuthola isilwane. Kodwa-ke, ubuhle bokunikeza indawo enhle kulezi zidalwa [Okuningi ...]
I-IMM ivunyelwe Ukuhamba Ngezithuthi Zomphakathi ..! I-New Tariff Iqala NgoMsombuluko
I-UKOME inqume ukwenza ushintsho olusha lwamanani ngenxa yokwenyuka okukhulu kwezindleko ezikhokhweni zokuhamba zomphakathi ezingakashintshi iminyaka emi-3. Ekhokhweni entsha ezosetshenziswa ngoMsombuluko, ngoFebhuwari 10; ithikithi eliphelele ele-elekthronikhi [Okuningi ...]
Izidingo Zesaphulelo Zokuhamba Zothisha Zabazimele Zase-Ankara nase-Izmir Zenqatshiwe!
NgoJanuwari 17, 2020, othisha bezikole ezizimele baqala ukuthumela izicelo zabo komasipala bamadolobha amakhulu e-Ankara nase-Izmir, lapho kubizwa i-Private School Teacher Solidarity Network. [Okuningi ...]
UMasipala wase-Ordu Metropolitan, ophayona ngamaphrojekthi azoletha idolobha, aqashe i- “Atatürk Park Sea Star” endaweni ephakathi kweMidi Restaurant neTelferik Sub Station ukwenza ugu lwasolwandle lube lusizo kakhulu. [Okuningi ...]
Inombolo yesitimela engu-44015, eyenza ukuhamba kuka-Eskişehir Konya, isabalalisa isinkwa eduzane nedolobha laseSülümenli e-Afyon futhi izama ukuwela ujantshi ngokuphula izithiyo ngenkathi izithiyo zivaliwe lapho zidlula khona. [Okuningi ...]
Ukuze kwandiswe imali yokugibela ibangana emfishane kusuka ku-2.60 TL kuye ku-3.50 TL ngebhasi lomphakathi elizimele, i-IETT, intela yemetro kanye ne-metrobus emhlanganweni weTravelation Coordination Center obanjelwe eDisaster Coordination Center kaMasipala we-Istanbul Metropolitan. [Okuningi ...]
Izimoto Zohambo Lomphakathi ziyakhishwa ku-Disense eKonya
UMasipala waseKonya Metropolitan wenza umsebenzi wokubulala amagciwane ezimotweni zokuhamba zomphakathi ezithwele amashumi ezinkulungwane zabantu nsuku zonke. Amaqembu axhumene noMnyango kaMasipala waseKonya Metropolitan woMnyango Wezokuvikelwa nokulawulwa kweMvelo, andise umkhuhlane kanye nobhubhane [Okuningi ...]
Izingozi ezibandakanya amathilamu agijima ku-Bağcılar Kabataş ziqoshwa ngamakhamera. Abathandi abakhonza izinkulungwane zabantu nsuku zonke bangaba nengozi ngezikhathi ezithile. Kwesinye isikhathi amathamu ayashayisana nemoto kwesinye isikhathi [Okuningi ...]
I-Union of Chambers of Craftsmen and Artisans e-Istanbul yamemezela ukuthi isinqumo se-hike amaphesenti angama-35 senziwa e-Istanbul. Kulindeleke ukuthi leli hike lisebenze ngemuva kokusayinwa kweziphathimandla ezifanele. Ukuhlanganiswa Kwezokuhamba Ezikhungweni Zokubhekana Nezinhlekelele kuMasipala Wedolobha lase-Istanbul [Okuningi ...]
Kulabo abafuna umsebenzi e-Eskisehir, i-Estram Light Rail Systems, okungenye yezinhlangano ezixhumene noMasipala weMetropolitan nge-İŞKUR. Izikhangiso ezingama-48 zokuqasha zishicilelwe ngu. Ngokwesitatimende, okungenani unyaka owodwa nesipiliyoni [Okuningi ...]
U-Erkan Yağcı, uMongameli we-Union of Mediterranean Tourismistic Hoteliers, uhlongoza ukuthi bashintshele ohlelweni lwesitimela phakathi kwe-Alanya ne-Antalya ukuze izivakashi zishiya amahhotela abo bese ziye ezansi nedolobha. I-Alanya Tourism Promotion Foundation (ALTAV) uMongameli, ihlaziya isiphakamiso sikaJaqucı [Okuningi ...]
I-Kocaelispor Derincespor Izindiza Ezengeziwe ezivela eDolobheni Ipaki leDerby
IKocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark izohlela uhambo olungeziwe lokudonswa kwedolobha lapho iKocaelispor neBelediye Deronetspor zizobhekana khona eKocaeli Stadium ngeSonto, 9 ngoFebhuwari ngo-13.30. UKUTHENGA KUSUKELA EKÖRFEZ NGAMA-150 KS [Okuningi ...]